Voaloboka ao, Champagne Out: Ahoana ny fanovàna ny AI amin'ny varotra varotra
Alakamisy Febroary 17, 2022 Alakamisy Febroary 17, 2022 Jonathan Spier
Jereo ny fahasahiranan'ny solontenan'ny varotra (SDR). Tanora amin'ny asany ary matetika tsy ampy traikefa, ny SDR dia miezaka ny handroso amin'ny varotra. Ny andraikitr'izy ireo tokana: manangona olona ho avy hameno ny fantsona. Noho izany dia mihaza sy mihaza izy ireo, saingy tsy afaka mahita ny toerana fihazana tsara indrindra. Mamorona lisitr'ireo fanantenana izay heveriny fa tsara izy ireo ary mandefa azy ireo any amin'ny toeram-pivarotana. Saingy maro amin'ny fanantenany no tsy mety